Ithegi: iindleko ngokukhokela | Martech Zone
Ithegi: iindleko zokhokelo ngalunye
Yintoni ukuthengisa umxholo?
NgeCawa, Agasti 23, 2020 NgoLwesibini, Matshi 2, 2021 Douglas Karr
Nangona besibhala malunga nokuthengisa umxholo ngaphezulu kweshumi leminyaka, ndicinga ukuba kubalulekile ukuba siphendule imibuzo esisiseko kubo bobabini abafundi bezentengiso kunye nokuqinisekisa ulwazi olunikezwe abathengisi abanamava. Ukuthengisa umxholo ligama elinomdla. Ngelixa lifumene amandla kutshanje, andilikhumbuli ixesha apho ukuthengisa kwakungekho mxholo unxulumene nako. Kodwa kukho okungakumbi kwisicwangciso-qhinga sokuthengisa ngaphandle kokuqalisa ibhlog, ke
Iindlela ezili-14 zokuGxila kwiiPhulo lokuThengisa ngeDijithali
NgoMgqibelo, ngoJuni 21, 2014 NgeCawa, uJuni 22, 2014 Douglas Karr
Ukuqala kwam ukuphonononga le infographic, bendinokuthandabuza ukuba zininzi kakhulu iimetriki ezilahlekileyo… kodwa umbhali wayecacile ukuba bajolise kwimikhankaso yentengiso yedijithali hayi kwisicwangciso ngokubanzi. Kukho ezinye iimetrikhi esizijongayo xa zizonke, njengenani lamagama aphambili asezingeni kunye nenqanaba eliphakathi, izabelo zentlalo kunye nokwabelana ngelizwi… kodwa iphulo ngesiqhelo linesiqalo kwaye limise ngoko ayizizo zonke iitriki ezisebenzayo.
Iimpawu zokuThengisa eziBalulekileyo
NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 Douglas Karr
U-Pardot wabeka ndawonye le ntengiso yeemetwork zokukopela ezenza ujikelezo. Uhlalutyo lwangoku lokuthengisa lunamandla. Abathengisi banokufikelela kuzo zonke iintlobo zeemethrikhi, ukusuka kwiphepha lokujonga kunye neenombolo zabalandeli ukuya ngakumbi ekutyalweni kwamanani abandakanya ukukhokelela kunye nentengiso. Ngokucaca okukhulayo kwedatha yentengiso, kulula ukubanjwa kwidatha ethi-amaxesha ngamaxesha kunokuba-ingachaphazeli ingeniso yakho. Abathengisi kufuneka bagxile